Motorola Moto Edge S: astaamaha, qiimaha iyo helitaanka | Androidsis
New Motorola Moto Edge S: wuxuu sii daayaa Snapdragon 870 wuxuuna leeyahay batari 5000 mAh ah
Maalmo ka hor waxaan dib u eegi jirnay ku dhawaaqista soo saarida taleefanka casriga ee casriga ah ee Motorola, kaas oo hada la soo bandhigay lana bilaabay Moto Edge S. Waqtigaas waxaan si faahfaahsan u sharaxnay dhowr ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee moobilkan uu ku faani doono », qaar ka mid ah oo aan xaqiijinay waqtigan, maadaama qalabku horeyba rasmi u yahay.
Kuwa bilowga ah, cinwaanka ay dad badani siinayaan taleefankan waa "dilaaga calanka", wiilkuna uma muuqdo mid aad u xun. Xitaa waxaan dhihi karnaa waa wax guuleeystay, tanna waa sababta oo ah qiimaha lagu shaaciyey Shiinaha waxay la tartameysaa mid kasta oo dhex-dhexaad ah, iyada oo aan dheeri aheyn, taas oo runtii xiiso leh, maxaa yeelay Snapdragon 870 Wuxuu gashadaa hoosta hoostiisa isaga ayaa ka awood badan kan Snapdragon 865, Chipset-ka processor-ka waxqabadka sare leh ee aan ka helno boosteejooyinka qiimaha ka bilaabmaya 500 iyo 600 euro si fudud
1 Astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Motorola Moto Edge S
Astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Motorola Moto Edge S
Waxa ugu horreeya ee aan kala kulanno Motorola Moto Edge S waa shaashaddiisa, taas oo ah tiknoolajiyada IPS LCD ee aan ahayn AMOLED si loo fududeeyo qiimaha wax soo saarka ugu dambeeya ee taleefanka. Si kastaba ha noqotee, waxay bixisaa xalka buuxa ee FullHD + ee 2.520 x 1.080 pixels oo u tarjumaya qaab muuqaal 21: 9 qaab muuqaal ah. Gudigu waa u hogaansanaanta HDR10 waxayna awood u leedahay inay ka shaqeyso iftiinka ugu badan ee ah 1.000 nits.
Waxay kaloo leedahay dalool labalaab ah shaashadda, kaas oo aan ku lifaaqanayn qaab kiniin u eg, laakiin la kala saaray, sida ka muuqata sawirrada taleefanka. Kani wuxuu ku yaal kamarad laba sawir oo sawir ah oo 16 MP ah (weyn) iyo 8 MP (xagal ballaaran).
Motorola Moto Edge S wuxuu leeyahay module gadaal leh sedex dareemayaal oo leh a 64 MP qaraarka toogtay ugu weyn, Muraayad ballaadhan oo 16 MP ah iyo 2 MP bokek sensor oo loogu talagalay tallaalada qotada dheer. Tan tan waa inaan ku darnaa laydhka laba-laabka ah ee la socda iyaga oo mas'uul ka ah iftiiminta muuqaalada ugu madow.
Sida chipset-ka processor-ka, sidaan horeyba u soo sheegnay, cusub ee Snapdragon 870 waa moobilka gacanta ee mas'uul ka ah siinta awoodda iyo xoogga taleefanka, oo leh 650 GPU, oo lamid ah sida laga helay Snapdragon 865. Dib uxasuusashada xoogaa, qaybtani waa 7 nm waxayna awood u leedahay inay ku shaqeyso ugu badnaan heerka cusbooneysiinta saacadda ee 3.2 GHz.
Sida laga soo xigtay Motorola lafteeda, dhibcaha Edge S ayaa ka sarreeya kan Xiaomi Mi 10 gudaha AnTuTu. Isugeyntiisa guud ee barxad-tilmaameedka waa 680.826 dhibcood, marka loo barbardhigo 585.232 dhibcaha Mi 10. Tirooyinkan sidoo kale waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in mobilada mobile-ka, oo lagu bixiyo noocyada 6 iyo 8 GB, uu yahay nooca LPDDR5, midka ugu horumarsan telefoonnada gacanta; tani waa 72% ka dhakhso badan LPDDR4. Waxaa sidoo kale sabab u ah ROM-ka, oo kiiskan uu yahay UFS 3.1, kaasoo 25% ka dheereeya UFS 3.0. Halkan waxaan ku haysannaa xusuus gudaha ah oo ah 128 ama 256 GB oo karti ah, oo lagu ballaarin karo iyadoo la adeegsanayo kaarka microSD ee ilaa 1 TB ah.
Is-maamulka Motorola Moto Edge S waxaa bixiya batari awood leh 5.000 Mah. Waxay taageertaa tikniyoolajiyadda degdegga ah ee 20W iyada oo loo marayo dekedda USB-C-USB.
Fursadaha isku xirnaanta waxaa ka mid ah taageerada 5G NA iyo shabakadaha NSA, Wi-Fi 6, iyo Bluetooth 5.1. Waxa kale oo ay leedahay laba qaybood oo NFC ah iyo GPS. Dhanka kale, astaamaha kale ee kaladuwan waxaa ka mid ah akhristaha faraha oo dhinac ku rakiban, IP52-heerka u adkaysiga biyaha, iyo aaladda dhegaha ee 3.5mm.
Motorola Moto Edge S waxaa laga bilaabay Shiinaha, sidaa darteed waxaa kaliya laga heli karaa halkaas hadda. Si kastaba ha noqotee, mar dambe ayaa loo sii deyn doonaa adduunka, laakiin ma jiro taariikh ku saabsan tan. Qiimaha la xayaysiiyay waa sidan soo socota; Waa in lagu xisaabtamo in ka baxsan Shiinaha kuwani ay si aad ah u kordhin doonaan:
6/128 GB nooca: 254 euro in lagu beddelo qiyaastii. (1.999 yuan)
8/128 GB nooca: 305 euro in lagu beddelo qiyaastii. (2.399 yuan)
8/256 GB nooca: 356 euro isbeddelka ugu dhow. (2.799 yuan)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » New Motorola Moto Edge S: wuxuu sii daayaa Snapdragon 870 wuxuuna leeyahay batari 5000 mAh ah
Sida loo suurtogeliyo had iyo jeer-muujinta qaabka EMUI
Shaqada duubista elektaroolka iyo cadaadiska dhiigga ee Galax Watch 3 iyo Active 2 waxay imaan doonaan Spain dhammaadka Febraayo